I-Sand Pebbles Tour N Amaholide | Sishayela ku: 993.702.7574
Ukukwazisa okuvela e-Sand Pebbles Tour N Travels - i-Odisha ehamba phambili ye-tour operator echaphazela imiphefumulo yamanani amakhasimende anamaphakheji magnetic nezinsizakalo ezisekelayo. Ukuhamba kwe-Sand Pebbles Tour N kuhanjiswe ku-1993 e-Bhubaneswar - idolobha elikhulukazi elihle kakhulu libizwa ngokuthi indawo yokuvakasha yamasiko kanye nokuya phambili okuqhubekayo ku-Odisha. Amahhovisi e-Sand Pebbles Tour N Amaholide asezindaweni ezizungezile futhi anesimo esijabulisayo.
Le nkampani, eminyakeni edlule ibeke ibhola njengendlela yokuhamba phambili kanye nenkampani yokuvakasha ngokuqeda ukuvakasha kwamaphakhethi amahle ngezinkambo eziqhakazile zokuhlela i-Puri Special Tours, i-North East Tours, i-Boat Cruises, i-Weekend Getaways, i-Bhubaneswar Special Tours, Thola i-Mini Amazon - Bhitarkanika, Odisha Tour Spiritual, Chilika ne Odisha Golden Triangle, RathaYatra Special Package, Buddhist India Gateway Odisha, Amanetha Enchanting Odisha, Exclusive Odisha Tribal Tour, Amakhasimende Odisha .... ukukhuluma ngambalwa. Kukhona kokubili amaphakheji okuvakasha okwakhiwe ngaphambilini kanye namaphakheji wokuvakasha okwenziwe ngokwezifiso ezihlanganisa izinhlanganisela eziningana ezibanzi ukuze zijabulise amakhasimende okungukuthi i-Odisha Tribal Tours enezifanekiso, iBuddhist Trail Odisha neBhubaneswar - Puri - Konark - nokuningi okuningi ...
Izintambo zokuzungeza izihlahla zeSandle ezinsizeni ezinsizakalo ezisekelayo. Inkampani ikhiphe umfanekiso we-niche endaweni Imisebenzi Yokuqasha Imoto futhi ifakwe izikebhe ezihamba phambili zezimoto zanamuhla nezomqeqeshi. Ukuvakasha kweNtshonalanga yeSandi akushiyi ukuthuthwa kwamatshe ukuze unikeze amakhasimende ayo ukuthi ajabule futhi agcine isiteji sayo nayo yonke into ekhona embonini yezokuvakasha. Le nkampani inwetshise amagatsha ayo okubeka phansi-e-Puri, eGopalpur, Bhitarkanika, EDelhi naseKolkata ngomzamo wayo omkhulu wokufinyelela amakhasimende amaningi.
I-Sand Pebbles Tour N Travels ihlonishwa yiNgqongqoshe Wezokuvakasha, i-Govt. we-India njengenhlangano enikwe amandla okuhlinzeka ngezinsizakalo zokuvakasha zekhwalithi kubakhenkethi. Iphinde ivunywe yi-IATA. Le nkampani ilungu lezinhlangano ezihlonishwayo njenge-IATO, UFTAA, ITTA, ADTOI, TAAI, ATOAI, FHRAI kanye ne-TAAO.
I-Sand Pebbles, iphayona lomqhubi wezokuvakasha u-Odisha uzibophezele ekunikezeni izinsizakalo ezihlukile ezihambelanayo nezokuvakasha kumakhasimende ayo, ngokuvumelana nama-paradigms aguqukayo embonini yezokuvakasha. Uhambo oluphakeme nokuhlelwa kwezihambi olwenziwa ngokucophelela yiqembu elihle nelisebenzayo lezokuvakasha kweSand Pebbles liye laba nenani elihlala njalo, isikhathi esiningi futhi senza isithombe se-firm. Emkhakheni wokuthuthukiswa komkhiqizo nokukhuthazwa, inkampani iye yahamba ngamakhilomitha ngenzuzo yokuncintisana. Ithimba elihlangene kakhulu lihlose, likhono, futhi lifake kwimodi yokusebenza; imikhiqizo ehlukahlukene yokuvakasha nemisebenzi ejabulisa amakhasimende. Lezi zihlanganisa i-eco, amasiko, okungokomoya, ezokungcebeleka, izilwane zasendle, kanye nama-MICE, ngaleyo ndlela zondla ekuthandeni nasezinxusweni zabaklayenti abahlukene.
I-Odisha idonsa ukuvakasha okungakahleleki kokuvakasha okuvela emhlabeni jikelele. Ukuvakasha kweNtshonalanga kweSandle kuzinyathelo ezinzima kusukela eminyakeni eyishumi nengxenye isebenza inani elibucayi labavakashi futhi linikeze amaphakheji amahle kakhulu, usizo lokuhamba, nokusekelwa kwezinto. Iziphakamiso zebhizinisi ezikhulayo ezibandakanya amadili ahlaba umxhwele, ukusebenzisana okuhlanganyelwe, kanye neo-amathuba akhulise ukuma kohambo lweSandle Amatshe amahle kakhulu njengomholi webhizinisi lezokuvakasha e-East India. Uhlelo olwamukelwe yi-firm ukuqinisekisa ukulawulwa kwekhwalithi elingenakulinganiswa kanye nokulethwa kwezinsizakalo eliphezulu ludonsele ukuncoma kusuka ezindaweni ezihlukahlukene.
Inquiry Us / Contact Us
Ukuvakasha kweNtshonalanga Yesihlabathi kuqhubekela phambili ngomoya ongenayo indomitable. Ubukhazikhazi be East India futhi North East India kukhonjisiwe, ukuchofoza nje kwesikhulumi se-chic ne-swanky esinikezwa yiSand ne-Pebbles tour kanye neqembu lethu lochwepheshe nge-penchant engavamile yokugqwesa kuqinisekisa okuhlangenwe nakho okwanelisayo ngokuphelele.
Ukuvakasha kweNtshonalanga yeSandani kunokwesikhwama esingenalutho egcwele amaphakheji amaningi okuthakazelisayo kuwe. Yiba Wildlife, Intshisekelo Special, Spiritual, Pilgrim, Cultural & Amagugu, Ukuzilibazisa, IMICE .... kunezinhlobo ezingaphezu kwamakhadi ukuqala ukukhathazeka kwakho. Okuthandayo kuyabaluleka kakhulu ekuvakatheni kweSand Pebbles - kungaba i-Free Independent Tour noma i-Group Inclusive Tour ... sinokuthengisela okuhle kakhulu.
Kule minyaka edlule, ukuvakasha kweSand Pebbles kuye kwasungula ukuba khona kwayo okuyiyona eyinhloko yomhlinzeki wezokuvakasha ophezulu we-Odisha ne-Car Rental Service.
Ngenxa yocingo layo le-on-dot, eliphuthumayo, nelihlelekile lezinsizakalo zeCar and Coach ekhoneni lwezingcingo - ukuvakashelwa kweSandle ngamatshe okwesikhashana kuye kwavela njengegama lomndeni futhi laqala ukuthanda abantu abaningi e-Odisha. Imikhumbi eyaziwayo yenkampani inezinhlobo ezingaphezu kwe-60 izimoto ezinokunethezeka ezinjenge-XNUMX ezihlanganisa i-Mercedes Benz, i-Skoda Superb, i-Honda Civic, i-Toyota Corolla, i-Honda City, i-Toyota Innova, iTata Indigo, i-Mahindra Logan, i-Mahindra Scorpio, i-Mahindra Bolero, iTata Indica , Umhambi we Tempo, ama-Mini-Vans nabaqeqeshi. Esikhathini sokuqondisa kukhona abaqeqeshi abanokuhlangenwe nakho futhi abanomoya wokungenisa izihambi abanikela ngemfashini yenkampani. Le nkampani inenkolo ithatha impendulo evela kumakhasimende ekusebenzeni kwabashayeli futhi ibuye ibhale njalo emakhodi wokuziphatha. Abashayela banikezwa amafoni futhi bahlale bexhumana nabaphathi.
Imizamo yokuvakasha kwamakhasimende eSand ahlanganisa ukuhlinzekwa kwamabhodlela amanzi wamaminerali, iphephandaba laseNgilandi, i-icebox, iphepha lezinsizi, ibhokisi lokuqala lokusiza kanye nesambulela kuzo zonke izimoto zalo. Zonke izimoto zinezikhwama zokuhlala nezinye izinto zobuchwepheshe nezesekeli. Izinsizakalo Zokuqasha Imoto Nokuqeqeshwa Zinikezwa 24X7.
Ukuvumelanisa nesidingo esikhulu sokuthi amaholide angama-off-the-beat-ithrekhi avela kude ne-monotony nokudakwa okuhlobene nokuphila okusemadolobheni, ukuvakasha kweSand Pebbles kuye kwasungula indawo ephawulekayo eBhitarkanika National Park. Le ndawo yokuhlala eyongezwayo yendawo yokucwaninga engokwemvelo ibizwa ngokuthi 'iJungle Resort'. I-Bhitarkanika iyindawo ehlelekile yamahlathi aseMangrove agcwele ama-creeks nama-flats ama-mud, ase-Kendrapara esifundeni sase-Odisha. Enye yezinto eziphilayo eziqhumayo ze-mangrove e-India, iBhitarkanika yikhaya lezitshalo nezilwane ezihlukahlukene. I-Sand Pebbles Jungle Resort ihlelwe ukufaka abavakashi ukuthi banomuzwa wemvelo. Leli phutha liye laguquka ukuba libe 'kumele lihlale libala' lapho kuhamba khona abagibeli bezinyosi. Ukuvakasha kweNtshonalanga yeSand wenze uphawu olungapheli njengenhlangano yebhizinisi yokuhamba ibhizinisi. I-MICE ibhizinisi enkampanini ihlonishwa njenge 'ace of the future'. Ukuvakasha kweNtshonalanga yeSande kuletha ibhizinisi nokuzilibazisa kakhulu. I-Odisha iyindawo ehambelayo ye-MICE yokufuna futhi ifinyelele imakethe ye-MICE enomdlandla, ukuvakasha kweSand Pebbles kulungiselelwe izinhlelo eziningi. Ukuhleleka kokuxhumana okuhle kunika amandla ukuvakasha kweSandle ukuhlinzeka noma ukuvimbela amakamelo ehhotela, ukudla izithamela ezithinta ingqondo, nokusiza ukuzijabulisa nokuzilibazisa izivakashi. Izinsizakalo zangempela zokuvakasha kweSand Pebbles zizoheha ukuhweba ibhizinisi lomcimbi.
I-Sand Pebbles Imicimbi 'n' Iqembu Lokuzijabulisa, i-unit ye-Sand Pebbles Tour 'n' Travels ibonwa yi-India Tourism, Govt. eNdiya naseMnyangweni Wezokuvakasha, iGovt. ka-Odisha. Lephiko lisekelwe enhloko-dolobha yase-Odisha - iBhubaneswar. Ukuphathwa kwesikhashana kubhekwa njengento yokuvakasha eyisibonelelo. Kukhona i-upswing ebhizinisini lezenzakalo ku-Odisha. I-Sand Pebbles tour iyaziqhenya ngokuba ngumlingani impumelelo ye-gala yebhizinisi lokuphathwa kwemicimbi ku-State. Ukuvakasha kweNtshonalanga kweNtshonalanga kulindeleke ukuba kukhishwe iziqhingi ezinkulu neqembu lakhe lobuchwepheshe elinomdlandla nelokudala elibhekene nokuzikhandla okukhulu. Umgomo oyinhloko wenkampani ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingavamile kumakhasimende ayo ahloniphekile ngokugxila ezintweni ezisekelwe ku-value-based, ezenzelwe amakhasimende.
Ukuvakasha kweNtshonalanga yamanhlabathi kushicilela izincwajana eziningi ezifundisayo kanye nezincwadi nezinye izincwadi zokuphromotha ezibonakala ziyamangalisa. Amaphakheji akhethekile okuvakasha kweSand Pebbles aphumelela ku-quotient lobuhlanga e-Odisha. Ivumela izintelezi zokuvakasha zezizwe kanye namathuba okuvakasha abavakashele ukuba babe nobuhlobo obuseduze nobuhlobo bendabuko bomdabu obusekelwa yizintatheli zakwa-Odisha. Amaphakheji okuhambela izinhlanga zenkampani avula ama-flavour akhethekile abantu bomdabu basekhaya; imikhuba yabo namasiko abo aqabulayo. Abavakashi bahlinzekwa ngezindlela ezihle zokubona imikhosi yabo enemibala egubha imikhuba ehlukile yokuphila efakazela ukulondolozwa kwefa elihlukile. Amachashazi e-Odisha indawo ephawulekayo ebalazweni le-ethnographic yaseNdiya ngokuba nomthelela omkhulu kunazo zonke emiphakathini yamazwe. Iningi lezintatheli litholakala ezifundeni zaseKoraput, eRayagada, naseNaurangpur, eMalkangiri, eKalahandi, eChamhamal, eBaudh, eKekharhar, eSundargarh naseMe Mayhanhanj. I-Sand Pebbles Tribal Tours ihlanganisa zonke lezi zindawo futhi zithinte izinhloso zobuhle kanye nezinkulumo zokumangalisa zemiphakathi yendabuko. Kuzo izakhamuzi ezishukumisekayo zendabuko, ukuvakasha kweSandle ngamatshe ahlinzekela amaphakheji okuthutha. Yonke imikhosi ilungisa emigwaqweni yakudala yenkampani. Abavakatjhi bafumana ithuba lokuphila isikhathi eside ekuhlanganyeleni ama-hotspots amasiko we-Odisha ngesikhatsi semikhosi. Inkazimulo nenjabulo yemikhosi emikhulu yamasiko efana nePuri International Beach Festival, futhi uMkhosi weKonark wenza amathuba okuvakasha ukuba ahloniphe ubuhle bobukhosi.
I-Odisha inezindawo eziningi zokungcebeleka zasemaphandleni ezingenakulungiswa. Ngaphandle kobuhle obuhle balezi zindawo ezihambela izindawo zokuvakasha, yini ekhohlisayo abavakashi ukuthi yimbali, izinkulumo zamasiko, izimpawu zenkolo kanye nokubaluleka kwemvubukulo. Ububanzi bokuvakasha ezindaweni zasemaphandleni e-Odisha buhlakazwa ngamaphakheji akhethekile wezokuvakasha kweSand Pebbles. Le nkampani ivumelana ngokubaluleka kokuthuthukiswa kwemikhiqizo yamasiko endabuko ezindaweni zasemakhaya ezifana neR Raghurajpur. Lenza izivakashi zibe nomuzwa wokubambisana ngokuqondene nokuphila komdabu emiphakathini yasemaphandleni futhi kuvula indlela yokuvuselela kwabo. Abavakatjhi bafuna ukuthintana nobudlelwane 'obusondeleneko' begodu 'nobuqiniso' nabantu bendabuko be-Odisha. Amaphakheji ohambo lweSand Pebbles aklanyelwe ukumisa u-Odisha kanye nezizwe ezizungezile njengeJharkhand, iMadhya Pradesh, neChhattisgarh ezihlanganisa i-panorama yendawo kulezi zizwe ezibonisa imibono yokukhazimula njengamasimu e-paddy, izingadi, indawo ehehayo yamagquma, izinhlobonhlobo zekhaya nokufuduka izinyoni, imikhosi, izikhalo .... futhi uhlu luphelele.